“ယုယ - နွေးထွေးသော ဘ၀လေးတစ်ခု”: " ဆန္ဒပြင်းထန် စိတ်ထက်သန် ကြိုးစား ရက်မှန်မှန် "
Posted by Yu Ya at 5/09/2010 10:08:00 PM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
အမောင် မောင်ယုယ( ရူးရ - လို့မခေါ်ဘူး နော် ဒီတခါ) တယောက် .
၃ နှစ်မြောက် မှာ ..
တညီးညီး တောက်လောင်နေတဲ့ ဆန္ဒမျိုး နဲ့ ..
“လူ” လုပ် နိုင် တဲ့ ၊ “ လူ ” ဖြစ် ပါစေ ...
ရက်မှန်မှန်လေးးး ကြိုးစား ပေးးးး ဟေးဟေးဟေး
ဟောဗျာ...ချော်ကုန်ပြီ..ချော်ကုန်ပြီ.. ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ကိုယ်လိုရာ ဆွဲတွေးသွားရတာတုန်း ဖွားကိရဲ့ ... ကျွန်တော် ရေးထားတာ ပို့စ်မော်ဒန်ဟုတ်ဖူးလေ...
မိန်းမခရီးသွားနေတာပဲ ဖြစ်ရမယ် ...လို့
ပျောက်နေတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုကိုပြန်တွေ့ ရသလို
ငယ်ငယ်တုန်းက ၀တ်ရွတ်အသင်းမှာ သင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
အယ် မကိက အားပေးနေတယ်ဗျိုးး
ကိုယုယရေ ဘယ်တော့လူဖြစ်မလဲဟင် ဟိဟိ
တော့ပစ်ချော်သွားရင်လဲ ချော်တီးးးနော် ဟိ
အောင်မာ လူပြိုဂျီးကများ ဟင်းးး ဟင်းးး လာလာချည်သေးရဲ့ ဟက်
ဟိဟိ..ကော်မန့်လေးတွေက ရယ်ရတယ်။ ကျားယို ကိုယုယရေ။ ၃နှစ်မြောက် မင်္ဂလာ အထိမ်းမှတ်နေ့မှ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ သာယာချမ်းမြေ့သော ဇနီးမောင်နှံအဖြစ် အိုအောင်မင်းအောင်းပေါင်းရပါစေရှင်။
ပြန်လာမှတိုင်ပြောမယ်။ (၃) နှစ်မြောက် မင်္ဂလာမှ သက်ထက်ဆုံးတိုင် လူကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာနဲ့ ချစ်ခြင်းတွေဆပွါးလို့ သူငယ်ချင်းတို့နှစ်ယောက် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ။
Happy 3rd Anniversary for you and your wifey bro!
"ဆန္ဒပြင်းထန် စိတ်ထက်သန်သူအား မပြီးမြောက်နိုင်သော အရာမည်သည် မရှိပြီ" တဲ့လေ။
မင်္ဂလာနှစ် ၃ နှစ်မှ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ကျမ်းမာပျော်ရွှင်ပြီး သာယာချမ်းမြေ့တဲ့မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်နိုင်ပါစေရန်တောင်းဆုပြုလိုက်တယ်နော်...
၃ နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ ဘ၀ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေနော်
ကိုယုယကြီးပျောက်ချက်စ်က ခုမှ ပေါ်တော်မူတော့တယ်... ပြင်းပြသော ဆန္ဒများနဲ့ လိုရာပန်းတိုင် အရောက်လှမ်း (ဘာလိုလိုပေါ့နော်...)နိုင်ပါစေကြောင်းးး သုံးနှစ်ပြည့်အမှတ်တရ ရေးသွားပါတယ်...